Imprint - Yenza.id
Ngenxa ye-'Jamani Telemedia Act 'kuyadingeka ukuba iiwebhusayithi kumazwe alwimi lwesiJamani mazixelele ulwazi malunga nomvakalisi. Okwangoku, akukho mithetho elinganayo kumazwe akhuluma isiNgesi, njenge-United Kingdom okanye e-United States. Ikholamu ngakwesokudla inikeza ulwazi malunga nomgqugquzeli.
Ukunika ingxelo kumxholo
Okukuqulethwe kwamaphepha ethu kwenziwe ngokunyamekela. Nangona kunjalo, asikwazi ukuqinisekisa isiqulatho sokuchaneka, ukugqitywa okanye ukuhlaziywa. Ngokutsho kwamalungiselelo omthetho, sinokuthi sinembopheleleko yomxholo wethu kula maphepha ewebhu. Kule ngongoma, nceda uqaphele ukuba asinyanzelekile ukuba silandele kuphela ulwazi oludluliselweyo okanye olondoloziweyo lwamaqela esithathu, okanye uphando ngeemeko ezibhekiselele kwimisebenzi engekho mthethweni. Izibophelelo zethu zokususa okanye ukuvimba ukusetyenziswa kolwazi phantsi kwemithetho esetyenziswayo ngokuqhubekayo ayinakuchaphazeleka ngolu hlobo ngo-§§ 8 kwi-10 ye-Telemedia Act (TMG).
Uxanduva lomxholo wezonxibelelwano zangaphandle (kumaphepha e-web of third parties) luhlala kunye nabaqhubi bamaphepha axhunyiwe. Akukho kuphulwa kubonakala kuthi ngexesha lokudibanisa. Ukuba kukho nawuphi na ukuphulwa komthetho oya kuthiwa, siya kususa ikhonkco ngokukhawuleza.
Amaphepha ethu ewebhu kunye neziqulatho zawo ziphantsi komthetho we-copyright waseJamani. Ngaphandle kokuba kuvunyelwe ngokusemthethweni ngumthetho (§ 44a kunye ne-seq. Yomthetho we-copyright), zonke iindlela zokusebenzisa, ukuzalisa okanye ukucwangcisa imisebenzi phantsi kokukhusela i-copyright kumaphepha ethu ewebhu kufuna imvume yangaphambili yomnini ngamnye wamalungelo. Ukuzaliswa komntu ngamnye komsebenzi kuvunyelwe kuphela ukusetyenziswa kwangasese, ngoko akufanele ukhonze ngqo okanye ngokungathanga ngqo kwimvuzo. Ukusetyenziswa okungagunyaziswanga kwemisebenzi ye-copyright kuhlawulwa (§ 106 yomthetho we-copyright).
Ngokuhambelana necandelo 5 TMG
ICandelo loYilo lweKhadi | NS
Gr. IBurstah 45
EJamani - eYurophu
Inombolo yokumenywa kwe-VAT ngokuhambelana necandelo 27 yesenzo se-VAT saseJamani:
Umntu ojongene nomxholo ngokuhambelana ne-55 Abs. 2 RStV:
Ukubonisa umthombo wemifanekiso kunye nemifanekiso: